Warqad Furan oo ku socota gudoomiyaha cusub ee gobolka Sitti – Xeernews24
Warqad Furan oo ku socota gudoomiyaha cusub ee gobolka Sitti
12. September 2018 /in Qormooyin/Articles /von admin
Guddoomiye Cumar Cabdi Maydhane ducada kasokow talo kolba wixii loo baahdo waan la garab taagannahay. Intanna waa hordhac Yar
Guddoomiye waxaad dhaxashay gobol ay dibu-curasho galgalin ka dhigtay oon meel fayow lahayn. Si Gobolka dib loogu soo nooleeyo, dhowrkan qodob ayaa ila aha kuwo muhiimad gaara leh Dad badanna muhiim la ah
1. Soo dhisidaa maamul tayo leh oo degmooyinka ah: Ku xulo dadka aqoon, karti iyo dhabarnimo kana fiirso shahaado site aan damiir iyo damqasho umadeed lahayn.
2-Dabagalka hantidii iyo miisaaniyadiihii Degmooyinka ee sida ba’an loogu tagrifalay oo ay ugu horrayso Soo celinta guryaha laga dhistay hantida shacabku ka rafaadsanyahay.
3-Midaynta bulshada: Maamulkii fitnadda badnaa ee Ina Iileey siyaasaddiisu waxay ahayd qaybi oo xukun. Ku dadaal sidii bulshada loo midayni lahaa si looga waayo basaas iyo dhuuni-qaate. Midba wuxuu sharcigu siiyana uheli lahaa loona Soo afjaro isdamaca sii jiray.
4-. Shaqo abuur: Dhalinyarada oo ah cududda dhabta ah ee gobolka ahna adhaxdii kacdoonka waxa ragaadisay shaqo la’aan baahsan. u samee shaqo abuur ballaadhan oo daboola baahidooda. Hana helaan fursado.
5. Soo celinta Gobolka galbeed: Geed gaaban iyo mid dheerba u fuul sidii loo soo celini lahaa galbeedka Dhuunyar iyo Dayn (Garbo-Ciise, Caddayti iyo Cundhuufo) loogana dhigi lahaa Gobol gaar ah ama ugu yaraan saddex degmo waayo dhulkaasi waa dhul aad u wayn aadna u dad badan meel halis badanna ku yaalo.
6-La xisaabtanka hay’adaha aan dawliga ahayn (NGOs and UN Agencies) ee iyagoo Gobolka ka hawlgala haddana ku dhuumaalaysta Diridhabe: Dhammaantood usoo rar magaalada Shiniinle si cadna ugula xisaabtan mashaariicda & shaqaalaynta. Hay’adda Save the Children far baa ku godane fiiro gaara u lahow. musuq aad ubadan iyo bahdil baa kajiro.
Qodobbadan qaarkood way ka awood badanyihiin Gddoomiyaha Gobolka Sitti kaligii waxayna u baahanyihiin iskaashi daacad ah oo dhex mara maamulka gobolka, ka deegaanka iyo qaybaha bulshada gobolka oo ay barbaartu ugu horrayso. Qoraallo ku saabsan cabashooyinka hay’adaha ku wajahan gaar ahaan Save the Children horay baan uga hadlay
Walina waxbadan baa dhiman oo musuq ah
ugu dambayn ha moogaanin inaad shacabka kasbato gaar ahaan Dhalinta si ay uhirgasho wada shaqayn hufnaan iyo daacadnimo leh
Qore; Aden Nageyee
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/09/warqad-furan.jpg 225 225 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-09-12 07:46:162018-09-12 07:46:16Warqad Furan oo ku socota gudoomiyaha cusub ee gobolka Sitti
Soomaalia saameyn nuucee ah ayay ku yeelatay Dhacdadii September 11, 2001-d... Geelaha Jabuuti iyo ka Eritrea oo isku arkaya Magaalada Addis ababa.